टाउकोको शल्यकृया गर्दागर्दै अचानक झ्याप्पै बत्ती गएपछि …. – Khabar PatrikaNp
टाउकोको शल्यकृया गर्दागर्दै अचानक झ्याप्पै बत्ती गएपछि ….
November 21, 2020 249
काठमाडौं । यो घटना हो चिलीको । एक बिरामीको टाउकाको अपरेशन गर्दा अस्पतालको लाइन गएकाले तत्कालै डाक्टरहरुले आफ्नो मोबाइलको टर्च बाली अपरेशन गरेका छन् । बिरामीको मस्तिस्कमा भएको ट्युमर अपरेशन गरेर निकाल्दै गर्दा अचानक लाइन गएको थियो । डाक्टरहरुका अनुसार अपरेशन निकै संवेदनशील अवस्थामा थियो । त्यस्तो बेलामा लाइन आउने प्रतिक्षा गर्न सकिने स्थिति थिएन ।
डाक्टरहरुले तत्कालै मोवाइल फोनको टर्च प्रयोग गर्ने निर्णय गरे । पछि डाक्टरहरुले यसको भिडियो सामाजिक संजालमा जारी गरेका छन् ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार परिवारले अस्पतालमाथि मु द्दा हाल्ने निर्णय गरेका छन् तर यसको पुष्टि भएको छैन । बिरामीलाई आइसीयूमा राखिएको छ । न्यूरो सर्जनको टिमले भने यो अपरेशन सफलतापूर्वक गरेपछि अरु अपरेशन नगर्ने अडान लिएका छन् । उनीहरुले अस्पताल व्यवस्थापनले फेरि यस्तो स्थिति नआउने सुनिश्चित नगर्दासम्म अपरेशन नगर्ने बताएका हुन् ।
Prevसानी ना’नीलाई पनि छो’डेन पा’पीले । गर्नु सम्म गरेर ढु’ङ्गाले कि’चिकि’चि मा’र्यो । आमा बाउ अचे’त
Nextगरे के सम्भव छैन ? यी हुन् खुट्टाले विमान उडाउने संसारकै पहिलो र एकल महिला पाइलट
केटी निहुमा फेरी अर्को घ,ट्ना… झ,गडा छुटाउन जाने कै ह,त्या
एक निर्दयी आमा ! आफ्ना पाँच सन्तानलाई वि’ष खुवाएर मा’रि’न्, आफू सिकिस्त अस्पतालमा !